Manintona - Fitsangatsanganana ankohonana | Seymour, IN | Ivon-toerana mpitsidika an'i Jackson County
Septambra 17, 2021 812.524.1914
inona no mampiavaka antsika
Brownstown Speedway dia nisokatra tamin'ny 1952 tamin'ny Highway 250 tao amin'ny Jackson County Fairgrounds, iray kilaometatra atsimoatsinanan'i Brownstown. Ny hazakazaka dia tanterahina ny volana martsa ka hatramin'ny oktobra amin'ny làlambe boribory boribory kilometatra kilometatra sy [...]
Tetezana rakotra Medora
Tetezana Medora Covered, namboarina tamin'ny taona 1875 avy amin'ny mpanao trano lehibe JJ Daniels, no tetezana lava telo hakiho lava indrindra any Etazonia. Any akaikin'i Medora any amin'ny East Fork an'ny renirano fotsy eo akaikin'i [...]
Ny lasa nataon'i John Mellencamp dia nambolena mafy tany Seymour sy Jackson County. Mellencamp dia teraka teto tamin'ny 7 Oktobra 1951. Mponina velona voalohany tao amin'ny spina bifida i Mellencamp, nihalehibe tao Seymour ary nahazo diplaoma [...]
Loopan'ny Bridge Bridge an'ny Indiana
Tranombakoka Freeman Army Airfield Museum
Any amin'ny 4784 West State Road 58 ao Freetown, ny tranombakoka dia miverina amin'ny fotoana fohy ho an'ireo mpankafy tantara na mponina taloha sy ankehitriny ao amin'ilay faritra. Zavakanto tranainy sy miaramila, sary an-tsekoly ary [...]
Tranombakoka Fort Vallonia
Vallonia sy Driftwood Township dia manan-karena amin'ny tantara ary izy no honina voalohany tao amin'ny Jackson County. Ny tranombakoka Fort Vallonia, miorina amin'ny tokotanin'ny trano mimanda teo aloha, natsangana tamin'ny 1810, dia manampy [...]
Museum momba ny pirinty an'ny Conner
The John H. sy Thomas Conner Museum of Antique Pirinty dia fivarotana fanontam-pirinty miasa amin'ny milina fanontam-pirinty tamin'ny taona 1800, miorina eo amin'ny tokotanin'ny Ivontoerana Indiana ho an'ny Zavakanto any Indiana. Ireo mpitsidika dia [...]
Ivotoerana Tantaran'ny Jackson County
Ny Jackson County History Center dia misy ny Société historique sy ny Genealogical Society. Ny tranombakoka ara-tantara dia misokatra manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 11 maraina ny talata sy alakamisy ary [...]
Fampirantiana ny Center Visitor Center any Jackson
Ny taloha sy ny ankehitriny an'ny Jackson County dia ankalazaina miaraka amin'ny fampirantiana nosokafana tamin'ny Mey 2013 tao amin'ny Jackson County Visitor Center. Toerana iray manana fo sy tantara manana ny azy manokana, tsaboina ireo mpitsidika [...]
Downtown Seymour manan-tantara
Meedy W. Shields sy ny vadiny Eliza P. Shields dia nanoratra ny lohan'ny tanànan'i Seymour tamin'ny 27 aprily 1852. Nantsoina hoe Mules Crossing ilay tanàna tamin'ny voalohany, saingy nomena anarana ho fanomezam-boninahitra ny sivily [...]
Brownstown, tanàna manan-tantara - Ewing
Attractions, Làlana manan-tantara
Zavamaniry biriky Medora
Jackson Live & Ivotoerana misy ny hetsika
Jackson Live no toerana mozika vaovao an'i Seymour. Seho isaky ny asabotsy alina amin'ny 7 hariva miaraka am-baravarana amin'ny 6:15 hariva Tapakila dia $ 15 ho an'ny olon-dehibe, $ 5 ho an'ny taona 5 ka hatramin'ny 12 ary ankizy 5 na ambany [...]
Tetezana Voasarona Shieldstown
Attractions, Tetezana voasarona
Ny Bridge Shieldstown Covered Bridge dia natsangana tamin'ny 1876 ary notendrena ho an'ny fikosoham-pianakaviana ao amin'ny tanàna Shields mifanila aminy. 13,600 19 dolara ny vidiny ary ohatra amin'ny hazo hazo tamin'ny taonjato faha-XNUMX [...]
Skyline Drive dia ao amin'ny alan'i Jackson-Washington State Forest. Izy io dia iray amin'ireo teboka avo indrindra ao amin'ny County Jackson. Misy faritra maro hijerena avy amin'ny toerana avo avo ary koa faritra piknik. [...]
Ny Muscatatuck National Wildlife Refuge dia natsangana tamin'ny 1966 ho fialofana hanomezana toerana fialan-tsasatra sy famahanana vorona rano mandritra ny fifindra-monina isan-taona. Ny fialofana dia 7,724 XNUMX hektara. Ao amin'ny [...]
Starre-Hollow State Recreation Area dia manodidina ny 280 hektara manolotra ny sasany amin'ireo lasy tsara indrindra any atsimon'i Indiana. Voasokitra avy amin'ny ala 18,000-hektara Jackson-Washington State it [...]
Alan'ny fanjakana Jackson-Washington
Ny ala-panjakana Jackson-Washington dia manodidina ny 18,000 hektara ao amin'ny fanjakan'i Jackson sy Washington ao afovoan'i Indiana atsimo. Ny faritry ny ala sy ny birao lehibe dia misy atsimo atsinanan'ny [...]
Pinnacle Peak dia teboka iray amin'ny làlana ao amin'ny Jackson-Washington State Forest izay manome fomba fijery mahatalanjona.
Fear Fair - Ny trano mampatahotra an'i Indiana mampatahotra indrindra dia manintona tsy misy hafa. Natao tamin'ny faran'ny herinandro tamin'ny fararano, ity haunt ity dia manome ny fientanam-po tsara indrindra amin'ny vanim-potoana. Zahao ny [...]
Racin 'Mason Pizza & Zone mahafinaritra
Racin 'Mason Pizza Fun Zone no toerana mety indrindra hakana ny ankizy amin'ny fialamboly. Mandehana Karts, fiara bumper, golf mini-jiro maitso, lalao arcade, trano goavambe, sakafo ary fahafinaretana rehetra azonao atao [...]